किन हटाइन दीपिकाले इन्स्टाग्रामका सबै तस्वीर ? - DURBAR TIMES
HomeEntertainment & Artsकिन हटाइन दीपिकाले इन्स्टाग्रामका सबै तस्वीर ?
किन हटाइन दीपिकाले इन्स्टाग्रामका सबै तस्वीर ?
एजेन्सी | बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले आफ्नो इन्स्टाग्राम र ट्विटरबाट सबै पोष्ट हटाएकी छिन्। उनले सन् २०२० को अन्तिम दिन डिसेम्बर ३१ मा सबै पोष्ट हटाएको भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ।
Previous articleझापामा मनाए राजा ज्ञानेन्द्रले नयाँ वर्ष, हेर्नुहोस् तस्वीरहरु
Next articleप्रवासी नेपालीलाइ ओलीले भनेः सडकमा सुन्नै नसकिने नारा लागे